မြန်မာနိုင်လို့ ငိုတဲ့ည။ [ သွန်းနေစိုး ] | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာနိုင်လို့ ငိုတဲ့ည။ [ သွန်းနေစိုး ]
Posted by ムラカミ on Nov 21, 2011 in Copy/Paste | 25 comments
ကြေးတံဆိပ် ...ဒါပေမယ့် သမိုင်းဝင်တဲ့ ကြေးတံဆိပ်
သူငယ်ချင်း အိမ်နားကနေဆိုတော့ ကိုယ့်အိမ်ကို တက္ကစီငှားပြန်လာရပါတယ်။ တက္ကစီကို လုံးဝ ဈေးမဆစ်မိ။ သူပြောတဲ့ဈေးအတိုင်း
တက်စီးလိုက်တယ်။ ခုနေအချိန်များ ကျနော့်အလုပ်ရှင်က အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတောင် ခဏတော့ ရယ်နေမိမလား မပြောတတ်ပါ။
ကျနော့်ညီမလေး၊ ငယ်ငယ်လှလှကလေးဗျာ။ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်သွားလုပ်ရရှာတယ်။ သူ့ယောက်ျား ကျနော့်ယောက်ဖကြီး
အင်မတန်သဘောကောင်းတဲ့အကောင်ကြီး။ ဗီယက်နမ်မှာ။မြန်မာနိုင်တယ် ကြားကြားချင်း ကျနော် ယောက်ဖကြီးဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။
`မင်းစကား ပြင်ပြောလိုက်စမ်းပါ´ တဲ့၊ ` မြန်မာနိုင်တာတင် မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ နိုင်တာ။ ငါတို့တွေ သူတို့ကို နိုင်လိုက်တာ။ ငါ့အလုပ်ရှင် ဗီယက်နမ်ကြီးကို
မျက်နှာတည့်တည့်ကြည့်ပြီး ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်၊ မင်းတို့ကို ငါတို့ နိုင်ပြီကွလို့´
အဲဒါ မြန်မာ။ အဲဒါ ငါတို့။ ဒါကြောင့် … ဒီ့အတွက် ငါတို့ဝမ်းသာတယ်။
အားလုံး … သတိထားကြ
ဒီတော့ … ဘာလို့ ရေးသလဲ မေးလာခဲ့ရင် တစ်ခွန်းထဲပြောမယ်။
copy/ paste မို့
ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်လောက်အောင် ခံစားရတဲ့ ပိုစ့်ပါဗျာ ….
သို့သော် rule က rule ပဲဆိုပီး ပြောရင်တော့
သဂျီးရေ …၆ချိုးမပြေ၀ူး ဆိုပီး ရွာထဲက ကန်ထုတ်လည်း ကံထုတ်ခံရဲပီ ..
သည်ပိုစ့်ကိုတော့ သည်မှာ တင်ခွင့်ပြုဗျာ ….
ရွာထဲက ရွာသူားတွေရော ….မန့်ကျပါဦးဗျာ..
ကျနော့် အဆီအငေါ် မတည့်တာတွေကို ဆဲကြပါဦးဗျာ ….
ပေါ်တင်ဆဲပါ ဝေဖန်ပါ… ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ပြောပါ …
ကျနော်မှားရင် လက်ခံမှာပါ (တနည်း)
မှန်တဲ့ဘက်က ၀ိုင်းထောက် ၀ိုင်းပြောပေးမယ့် သူတွေချည်းပါ …
(ရွာ့ ပညာရှိတွေကို ယုံကြည်ပါတယ်ဗျား…)
အမည်မသိ အနီကဒ်ပိုင်ရှင်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ …အနီကဒ်ပြရတာ လွယ်ပါတယ်
ဝေဖန် ဆွေးနွေး ကြဖို့သာခက်တာပါ…
သဂျီးတို့ ဆြာသစ်တို့လည်း ပြောခဲ့ ထောက်ပြခဲ့ကြတာ ဖတ်မိကြမှာပါ..
မတူတာတွေထား တူတာတွေက စကြရအောင် ..
တူတာတွေစရင်း ..မတူတာတွေအကြောင်း အစွဲကင်းကင်းနဲ့ ဝေဖန်ထောက်ရှုရအောင်….
ကျနော်တို့ လူစဉ်မီချင်တယ်ဟုတ် … ထိုမှတဖန် အနည်းလေးတော့သာချင်တယ်ဟုတ်
ဖြစ်နိုင်ရင် ခေါင်းတလုံးမြင့်ချင်တယ်ဟုတ် …
စာဝင်မရေး ဖြစ်ရင်တောင် ဆဲစာလေးဖြစ်ဖြစ် ချီးမြှင့်ပေးပါလို့
သည်နေရာကနေ တောင်းဆို အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား…
P.S လက်တလော Latest news အနေနဲ့ကျနော်တို့ညီငယ်တွေကို စေဒနာရှင်
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများက(သည်ချိန်မှာ ခေတ်ပျက်သူဌေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ခနထားလိုက်ဦး
ဒေါ်လာ ၁သိန်းခွဲ စုပေါင်း ချီးမြှင့်ကြကြောင်းပါ)
အခုရေးတဲ့ ကော်မန့်ကို ပို့စစ်မှာထဲ့ရေးရင် တရားဝင်သွားတာပေါ့ ညီရ။
ကိုယ့်အာဘော် ထဲ့ တယ်ဆို အိုကေတယ်လေ။
တချိန်က မြန်မာပြည်က ဂိုးသမား အောင်ကျော်ကျော် ဆိုတာရှိတယ်။
အဲဒီ ဗီယက်နမ်က ကောင် က ဂိုးသွင်းဘို့ သယ်အလာ
ဂိုးနားအရောက်မှာ အောင်ကျော်ကျော်က ထွက်ဖမ်းတာမိတယ်။
အဲဒီ ဗီယက်နမ်ကောင် ကအောင်ကျော်ကျော် ဗိုက် ကို အဖြုထည် ကြီး ကန်တယ်။
ဗိုက်ကိုအလွတ်ကြီး အကန်ခံရတဲ့ အောင်ကျော်ကျော် ရုတ်တရက် ပေါက်ကွဲသွားပုံရပါတယ်။
အဲဒီ ဗီယက်နမ် ကောင် ကို အသားလွတ်ကြီး ပြေးကန်တော့ ပြေးလာတဲ့ ဒိုင်ရှေ့မှာ ရှင်းရှင်းကြီးပေါ့။
အောင်ကျော်ကျော် အနီနဲ့ထွက် ၁၀ ယောက် ၁၁ ရောက်ကန် မြန်မာရှုံးခဲ့ရတယ်။
စိတ်ကောင်း မရှိတဲ့ ဗီယက်နမ်လို့ စိတ်ထဲစွဲသွားတယ်။
နိုင်ငံခြား ရောက်တော့ အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းလိုဟာမျိုးဆိုတော့ အဲဒီ ဗီယက်နမ်တွေ တွေ့တယ်။
ကျောင်းနေဘက် ဗီ ကောင် တကောင် အလုပ်ရတယ်။တိုရှီဘာမှာ။
ငါအလုပ်ရပြီတဲ့ ဒို့ဒီညဒင်နာစားရအောင် မင်းလာခဲ့ပါလားတဲ့ တယောက်ကို ၅၀၀၀ ကျမယ်တဲ့။
ပြောပုံက။ စားချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ငါးသလောက်တွေ။ ပေါင်းတတ်ရင်
အရိုးပါဝါးစားသွားလို့ရတာ။ ပိုက်ဆံ ကအရေးမကြီးဘူး။ မခင်တတ်တဲ့ နှလုံးသား။
အရင်ထဲက အောင်ကျော်ကျော်ဖြစ်ခဲ့တာ တင်းနေခဲ့တာ အဲဒီ နောက်ပိုင်း ဒီမှာ မလွဲမရှောင်သာပေါင်းရတဲ့
ခု ဒီလိုကြားရတော့ ကျေနပ်တယ်။ သစ်မင်း လူ မှန် ရင်ဘယ်သူ့ကိုမဆိုခင်လို့ရတယ်။
အဲဒီ ဗီကောင်တွေတော့ ခင်လို့ကိုမရခဲ့တာ။
အောင်ကျော်ကျော် အကန်ခံရတာ ငါတို့နိုင်ငံကိုကန်တာဘဲလို့ စွဲသွားပြီး ခုထိမကျေဘူး။
နိုင် စမ်း။ အမြဲနိုင်စမ်း။ ဒို့နိုင်ငံကိုကန်ထားတဲ့ အယုတ်တမာတွေ။
ညီဇာဂီ ဟိုနေ့ကရှုံးလို့ ဆဲတယ်။
အာရှရဲ့ အကောင်းဆုံးတွေ ပြန်သိမ်းပိုက်မယ်…။
ဘယ်ကြားထဲက ကြက်သီးထရသလဲ သဂျီး …
သဂျီးက ဗမာ ဟုတ်ဝူးလား…..
ဂီဂီ လောင်းကစားသမားမဟုတ်ဝူး …..
ဘောကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပီး ….အကြည်ညို မပျက်ချင်ဝူး …
ပျော်လို့ …အိပ်မရတဲ့ညမှာ ..
သဂျီး ကြည့်မရပေမယ့် စာထိုင်ရေးနေဖြစ်တဲ့
ဦးဦးဖျားဖျား မန့်သွားပေးတာကျေးဇူးပါဗျား. …
စိတ်ဓါတ် အဆင့်ရှိတဲ့အသင်းတွေ လူတွေ ကွာပါတယ်ဗျာ..
ကျနော်တို့ ဂျပန်နဲ့ကန် ၁၀ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ ရှုံးဦး..
၁ဂိုးအတွက် ဂျပန်ပရိတ်သတ်က လက်ခုတ်ချီးမြှင့်ပါတယ်..
(ဒါမျိုး ကျနော်တို့ဆီလည်း ကျင့်ရဦးမယ်..)
အရှေ့တောင် အာရှမယ်တော့ … သတ်ကြဖြတ်ကြတာဟာ
တတိယ ကမ္ဘာစစ်ကို ဘောလုံးကွင်းတွင်းမှာဘဲ တိုက်တော့မယ်
ကိုအောင်ကျော်ကျော် ကိစ္စ တသက်စွဲထင်ဖူးပါတယ်
ဗလချိုက် ရှေ့တန်းက ဥပဒေပကျူးလွန်ပါတယ်
ရဲရဲရေးရရင် ဘယ်ယောက်ျားမှ ခွင့်မလွှတ်နိုင်မယ့်ချက်ကောင်းကိုပါ…
ကိုအောင်ကျော်ကျော် သူ့ကို တချက်ကန်ပီးပစ်လဲသွားပါတယ်.
(ဒါတွေက အစ်ကိုလည်း သိပီးသားဖြစ်မှာပါ…)
ကျနော်ကတော့ ခုနေပြန်တွေးရင် မာကတ်တာ ပီပီ ယုတ်မာတယ်ဆြာရေ့
ဒေါသအလျောက်တုန့်ပြန်တာ ကစားပွဲတခုအတွင်းမှာ ဖြစ်နေတာကြောင့် …
ကျနော်သာ ကိုအောင်ကျော်ကျော်နေရာမှာဆို …သည်ဗထက်ချိုက်ကို
အသေ လုပ်ရင်လုပ် မလုပ်ရင် …စနိုက်ပါ မှန်တဲ့ အကယ်ဒမီရှော့နဲ့
အနှီ သတောင်းစား အနီကဒ်ထိအောင် ..(မထိတောင် လူညစ်ကစားသမား
အနေနဲ့ တသက်လုံး ကစားသွားလို့ မရ အောင် လုပ်ပစ်ချင်တာပဲ…)
သည်တော့ နိဂုံးချုပ်ဆိုရင် ..၁၀-၁၁ ကစားရတယ်
မဖြစ်လို့ အသည်းအသန်ဖျက်နေရတဲ့်နောက်တန်းက ကိုအေးနိုင် ၂၀ါ၁နီထိတယ်…
ကစားကွက်အရ ခြေစွမ်းကောင်းပေမယ့် ခံစစ်ချိန်းရမယ့်အနေအထားမှာ
ဘယ်တောင်ပံလူ ကိုမောင်မောင်ဦးထွက်ပေးပီး ခံစစ်ကို ပိုးရတယ်…
အတိတ်ဆိုးတွေပါ …နောက်ပိုင်း ၁ဂိုးထက်ပိုမသွင်းဖို့ ညှိကန်ရင်း အနှီ အသင်းက
ကောင်တွေ ခေါက်ဆွဲကိစ္စ ညိလို့ အရေးယူတောင်ခံရတယ်
သည်နှစ်လည်း ၂ဂိုးပဲသွင်းမယ် ဘာညာနဲ့ လေကျယ်နေခဲ့တာ ..
သည်ကနေ့တော့ သမိုင်းဝင်တဲ့နေ့ပဲဆြာ ..
သူငယ်ချင်းတယောက် ရဲ့ status message ကိုယူသုံးရရင်
ယူချင်ယူ မယူချင်နေ ဒါ အတိုးရော အရင်းရော ပေါင်းဆပ်လိုက်တာ တဲ့ …..
pS. U23အတွက် ၁သိန်းခွဲသောအလှူရှင်စာရင်း က ခုမှပဲစသေးတာပါ …
ခေတ်ပျက်သူဌေးတေဂွတို့ဒေါ့ထှာ(ထွီ)ခင်ချွေတို့ ထွန်းနိမ့်နိုင်တို့ မပါသေးပါလား
ဆြာ သွန်းနေစိုးရဲ့ FB ပါခင်ဗျား
ဂီဂီ ဟိုတစ်နေ့ က မီးဒုတ်တွေ့ ရှို့  လို ရှို့  ဆဲလိုဆဲ နဲ့ ..
ဒီနေ့ကျတော့ ပြောင်းပြန် ဖြစ်သွားပြန်ရော …
သြော်းး နောက်ဆုံးတော့ ..မြန်မာ ဟာ မြန်မာ ပါ ဘဲ … ရှုံး ရင် ၀ိုင်းဆဲ လိုက်ကြ .. နိင်ရင် တက်မထောင်လိုက်ကြ ..
ဒါမှ မဟုတ် .. မားကတ်တင်း သမားမို့လို့လား ဟင် .. :grin: :grin:
ဟိုး …ဆြာသမား ဟိုးထား …
ကျနော် ဘောသမားတွေ ဆဲတာ မဟုတ်ဝူးလေ…
အဲ့နေ့ကတည်းက ….. ဘပုနဲ့ ကျနော်ပဲ အနှီ ငတိတွေဘက်ကပဲရပ်ခဲ့တာလေ
ဒီထဲမှာ တောက်လျောက် မန့်ခဲ့တာလေ. …
ဆဲတာ က ဟိုလူရီးကို ဆဲတာလေ….
ခု နိုင်လည်း ဆဲတုန်းပဲ ..ဟီး ….
ဒါနဲ့ …..U-23 ရေ ….သဂျီးက ပွိုင့် ၁၀သိန်း ဆုချမယ်တဲ့ဟ ..
ဖလားသာ ရလိုက်လို့ ကတော့ကွာ..
ငိုပြီး တက်ပါ တက်ပလိုက်မယ် ကြာလို့ .. :sad:
ရွှေနဲ့ လွဲပေမဲ့လဲ. ကြေးရတာလဲ မဆိုးပါဘူး…
နောက်နှစ်အတွက်..အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ တော့ လိုတယ်နော့.
ဆောရီး ဆောရီး .. ကျွှန်တော် လည်းဖတ်တာတွေ များပြီး ရောသွားတာ ..
ဟုတ်ပ .. ဟို လူဝ ကတော့ …..
ကျွန်တော့် ပွုင့်တွေလည်း ဆုချမယ် .. တစ်သိန်းက ပြည့်ဖို့ရာ လမ်းမမြင်တဲ့ အတူတူ တော့.. :grin:
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြန်မာဖြစ်ရလို့ ကြေကွဲရတဲ့စိတ်ဟာ နိုင်ငံခြားထွက်တဲ့အခါ သိပ်သိသာပါတယ်” True သွန်းနေစိုး ။ Excellent writing ! Anyway, I feel very proud behalf of my country when I reading this post ! Appreciation with my favorite song _ http://www.youtube.com/watch?v=7ENPXz_mzWE
ကောင်းလိုက်တဲ့အရေးအသား စိတ်ဓါတ်ပါ တက်ကြွလာတယ်… ရွှေမရတော့လဲ ကြေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်ကြတာပေါ့…………
မြန်မာ့ အားကစားက စီးပွါးရေး ဦးမော့လာမှ ပိုတိုးတက်လာမယ် ထင်မိတယ်……
ခုနေအချိန်များ ဖလားရလို့ကတော့ တော်တော် ကြည့်ကောင်းမယ့်ပွဲပါပဲ…..
ရှုံးလို့ ဆဲတာ မဟုတ်ပါ။
ဘောလုံးသမားတွေကို ဆဲတာပါ ဆရာတို့။
မြန်မာဆိုရင် နိုင်မှ ကြိုက်တဲ့ ဘလက်။
ကျမလည်း မြန်မာပြိုင်တဲ့ ဘော်လုံးပွဲတိုင်း မကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် facebook ကနေတက်လာတဲ့ သတင်းကို စောင့်ကြည့်ဖြစ်တယ်၊ soccermyanmar ကနေပြီးဖတ်ဖြစ်တယ်၊ မြန်မာနိုင်တဲ့အတွက် အရမ်းပျော်ပါတယ်။ ကြေတံဆိပ်ဖြစ်ပေမယ့် ထိုက်တန်စွာရခဲ့တဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကော်နက်ရှင်ကြောင့်ထင်တယ် ကောမန့်က၂ထု ဖစ်တွားလို့ ၁ထု အမှိုက်တောင်းထဲ ထည့်လိုက်တယ်နော
ရှုံးတုန်းက ဆဲ ထားပေမဲ့ နိုင်လာပြန်တော့လဲ ဂုဏ်ယူရတာပဲ..
အရင်တုန်းက အကြွေးမဆပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ နောင်တော်ကြီးတွေ ဘယ်လောက်တောင်ဝမ်းသာလိုက်မလဲ…
ဆုကြေးတော့ သယံဇာတ တွေ ခွတုတ်ထားတဲ့ ဟိုလူကြီးတွေပေးလိမ့်မယ်..
ကိုသစ်မင်း ပြောတာနဲ့ သတိရသွားပြီ။ အောင်ကျော်ကျော် အထုတ်ခံရတုန်းက ဒေါသတွေ ထွက်လိုက်တာ။ ကျောင်းေ၇ာက်တော့လည်း မပြီးနိုင်မစီးနိုင် စာမသင်နိုင်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတယောက်ကဆို အောင်ကျော်ကျော်ရယ် အထုတ်ခံရမဲ့ အတူတူေ-ာက်ခွက်ကိုသာ ကန်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ (၁၀)ယောက်တည်းနဲ့ ကန်ရတာကို သနားမဆုံးဘူး။ ဘောလုံးပွဲကိုတော့ ၀ါသနာမပါပါဘူး ကိုယ့် ဗမာပါရင်သာ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်တယ်။ ကြည့်တိုင်းလည်း နိုင်စေချင်တာ။ အခုနိုင်ပြီဆိုတော့ ကြေးပဲဖြစ်ဖြစ် ၀မ်းသာသား။
၁၀ယောက်မှုတ်ဝူး ၉ယောက် ကျောနံပါတ်၎ အေးနိုင် ၂၀ါတနီ ထပ်ထိသေးပါတယ်ဆိုမှပဲကို
ကိုဘလက် ပြောသလိုပဲ ဘောလုံးကိုယ့်ဆီမှာရထားလို့ရှိရင်လဲ အပေးအယူလုပ်မကစားပဲ ကိုယ်နာမည်ရရေး ကိုယ်တိုင်သွင်းယူမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလဲ ပြုပြင်သင့်ပါတယ်
အများကပေးတာက ၅မည်ရ အင်ဇာဂီ။
ကိုယ့်ဖာသာပေးထားတဲ့ ဘွဲ့တွေက အင်ဖန်နတီ။
ရေမြေခြားမှ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ ပိုထင်ရှားပေါ်လွင်လာတယ်။
နီးတကျက်ကျက် ဝေးတသက်သက် ဆိုသလိုပေ့ါ။
ကဲ- မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့ အင်ဖန်နတီကိုပဲ မြန်မာ့ဘောလုံးအသင်းအစား အားပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆြာသွန်းနေစိုး က ရန်ကုန်ကစာရေးဆြာပါ
ဟားဟား…….. ရွှေက မစစ်လို့..
ဗီယက်နမ်ကို သိပ်ပြီး ပြန်လာတာတော့ ခိုက်တယ်..
မလေးနဲ့တုန်းက သူ့ပထွေးတွေကို ကြက်ဥတိုက်နေတယ်..
နောက်တစ်ခေါက် မလေးနဲ့ ကန်ရင်နိုင်အောင်ကန်…
မအေရိုး မလေးနည်းပြ မျက်မှန်နဲ့ ပွဲစင်မှာ ထိုင်နေတဲ့
ကျေနပ်တယ်.. တို့ဗမာ ကြေးရတာကျေနပ်တယ်..
မအေရိုး မလေးတွေ ရွှေရတာမကျေနပ်ဘူး..
တို့ ဗမာ ပြောင်ပြီ ။
တို့ ဗမာ ပြောင်ပြီ
သူတို့ လေးတွေ ပြန်လာရင် ၊ အင်တိုက်အားတိုက် ကစားခဲ့သမျှ တွေ ပင်ပန်းခဲ့ရတာတွေ အတွက်
အဘဖော ရဲ့ပို့ စ်ထဲ ကလို ဆီလူးပေးမယ့် မဒီကညာ လေးတွေ စောင့်ကြိုနေတာမို့ 
တို့ ဗမာ ပြောင်ပြီ
ကိုအင်ဇာဂီ…မြန်မာအသင်း နိုင်နိုင် ရှုံးရှုံး အားပေးလျှက်ပါ
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအသင်းရော မြန်မာပရိတ်သတ်ရော
ရှုံးတတ်ဖို့ နိုင်တတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ရဦးမယ်ထင်ပါတယ်။
မြန်မာကွ…ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်မှန်မှန်ရင် မင်းတို့ ဗီ။စင်ကာပူ။တွေ တွေ့မယ်။ဟား..ဟား